China UV herinaratra, mpanondrana rano, borosy volom-borona manonta miaraka amina orinasa mpamokatra sy mpamokatra | Yongsheng
UV herinaratra, mpanondrana rano, borosy volom-borona manonta mamirapiratra miaraka amin'ny tahony noforonina
Material: ABS ， fingotra ， nylon, volom-bolo.
Color: Gold, Blue, voninkazo ... Customization.
Modely tena tsara + ondana malefaka + Boriborin'ny lambo voajanahary + fehin-tànana nilonika malefaka. Malemy fanahy izy io ary manome ny volon-koditrao sy ny volonao amin'ny alàlan'ny teknika efa nampiasaina efa an-jato taonany. Rehefa manatsara ny volonao ny volom-boal, dia mihalava ny volon'ny nylon lava sy lava kokoa nefa malefaka amin'ny loha-sainao manontolo nefa tsy misy tolona, ​​manotra isaky ny santimetatra amin'ny loha. Ny endrik'ireo loha rehetra dia azo ampiasaina amin'ny tanantsika.
Borosy boribory ho an'ny fanamainana mitsoka ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy na inona na inona ny volon-doha, borosy boribory miaraka amina asa bebe kokoa Ny borosy fanaovana fika boribory tena avo lenta dia afaka manampy anao manitsy sy mametaka izay ilain'ny salon sy trano. Ireo borosy ireo dia borosy tonga lafatra amin'ny volo lava na fohy, olioly na mahitsy, matevina na tsara. Ny borosinay dia noforonina mba hamakivakiana karazan-bolo rehetra manala ny kitrokely rehefa manalefaka ny volo. Miasa tsara amin'ny volo mando na maina izy io ary mety tsara ho an'ny lehilahy sy vehivavy ary ankizy.
Ireo borosy volo ireo dia mety amin'ny pirinty elektrika UV, misy voninkazo, fanontana famindrana rano hazo, fanontana miloko marevaka. Ny endrika manokana miaraka amin'ny borosy tonga lafatra amin'ny fety sy fanomezana. Manana endrika 20 eo ho eo izahay. Ary koa ny endriny dia azo namboarina. Azonao atao ny manolotra ny volanao manokana fa hanaja tanteraka ny tsiambaratelon'ny vokatrao izahay.
Previous: Famatotra fingotra, herinaratra UV, fanontam-pirinty manjelanjelatra, borosy volo detangler famindrana rano miaraka amin'ny volon'ny Intelliflex
Manaraka: Borosy vita amin'ny volom-bolo misy pirinty maro loko miaraka amina famolavolana
Borosy volo marobe
Borosy borosy vita amin'ny plastika
Borosy volo plastika
Borosy borosy volo plastika